HUAWEI P50 Pro - HUAWEI Myanmar
120 Hz Screen Refresh Rate⁠⁠2,
4360 mAh Large Battery⁠⁠4,
True-Form Dual-Matrix Camera⁠7,
200x Zoom Range⁠⁠8,
Design Camera Performance Experience
ရိုးရှင်းသော၊ ဂျီဩမေတြီဒီဇိုင်းက Dual-Matrix Camera Design ကို အမှန်တကယ် ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ဘယ်နေရာသွားသွား စူးရှတဲ့မျက်လုံးနှစ်လုံးလိုတောက်ပနေမှာပါ။
ကြီးမားတဲ့ Screen နဲ့ ဘက်ထရီကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ကိုယ်ထည်အတွင်း တပ်ဆင်ထားတဲ့ HUAWEI P50 Pro က အရင်ထွက်ရှိထားတဲ့ မျိုးဆက်တွေထက် ပိုမိုပေ့ါပါးပြီး လက်ထဲမှာကိုင်ရတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
6.6 လက်မ မျက်နှာပြင်⁠1 ကသင့်အားလက်တွေ့ဘဝကမ္ဘာကိုပြသရန် ညှိယူထားပါတယ်။ 120 Hz screen refresh rate⁠2 နဲ့ 300 Hz touch sampling rate⁠9 ကိုပံ့ပိုးပေးတာ‌မို့ ချောမွေ့တဲ့ ကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းပါတယ်။
P3 wide color gamut နှင့် 1.07 ဘီလီယံအရောင်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် True-Chroma က အမြင်အာရုံက မြင်ရသည့် အ‌ရောင်များအတိုင်း တစ်သမတ်တည်းရှိသောအရောင်များကို ဖုန်း မျက်နှာပြင်တွင် ပြသပေးပါတယ်။
120 Hz screen refresh rate⁠2 နဲ့ 300 Hz touch sampling rate⁠9 အထိရတဲ့မျက်နှာပြင်က မြန်ဆန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ ချောမွေ့သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံ့ကိုပေးစွမ်းပါတယ်။
1440 Hz high frequency PWM dimming control⁠10 ကမျက်စိညောင်းညာမှုကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ အလင်းရောင်အားနည်းသည့်အခြေအနေမျိုးမှာကို သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အရည်အသွေးမြင့်ကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ခံစားရမှာပါ။
ရေစင်ခြင်း၊ ရေနှင့် ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ IP68⁠3 အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
HUAWEI XD Optics ကစမတ်ဖုန်းဓာတ်ပုံကိုပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖမ်းယူနိုင်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော HUAWEI XD Fusion Pro image အင်ဂျင်က ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပုံရိပ် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ထုတ်ယူရာတွင်ပိုမိုအားကောင်းစေပါတယ်။ ပင်မကင်မရာmatrix ကစစ်မှန်တဲ့အရောင်ကိုပေးစွမ်းပြီး SuperZoom matrix ကအနီး/အဝေးပုံများကို လှပကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Shows you the true colours. True-Chroma Image Engine ကမ္ဘာကြီးရဲ့အစစ်အမှန်အရောင်တွေကို ပြသနိုင်ဖို့ အဆင့်မြှင့်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင် အာရုံခံစနစ်၊ P3 ကျယ်ပြန့်သောအရောင်အသွေးနဲ့ အရောင်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကိုချိန်ညှိနိုင်မှုတွေပါဝင်ပါတယ်။
Seeing is believing. အရောင်များအကြားက ပါးလွှာတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုများရှင်းလင်းဖော်ပြရာမှာ အထူးကျွမ်းကျင်တာမို့ အကြိုက်ဆုံးမြင်ကွင်းတွေကို ဘယ်တော့မှလက်လွှတ်ခံမယ်မဟုတ်ပါ။
သေးငယ်တဲ့အရာတွေကို ကြီးကျယ်တဲ့ အရာတွေအဖြစ် ပြောင်းလိုက်ပါ။
အလွန်နီးကပ်သော 2.5 cm macro ရိုက်ချက်ရှိသေးငယ်သောအရာဝတ္ထုများကိုရှာဖွေပါ။ သင်သည်လက်ရာမြောက်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ မမျှော်လင့်သောအံ့သြဖွယ်ရာများကို ချီးမြှောက်ပါ။
*ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို HOTA အဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
**သာဓကအနေနဲ့သာဖြစ်သည်။ ဒီပုံများကို HUAWEI P50 ဖြင့်ရိုက်ကူးထားပါသည်။
Clarity is the priority. HUAWEI XD Optics အသစ် နှင့် HUAWEI XD Fusion Pro ရုပ်ပုံအင်ဂျင်အသစ် ကအလင်းပိုမို၀င်နိုင်ပြီးပုံစံများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများကိုအသေးစိတ်ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်စေ မယုံနိုင်လောက်အောင် ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုရနိုင်ပါတယ်။
Let what's unseen be revealed. အလင်းရောင်နည်းပါးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပင် ထင်ရှားပြတ်သားအသေးစိတ်ကျကျမြင်နိုင်ပါတယ်။
A wide, wonderful view. 120° Ultra-wide အနောက်ကင်မရာ⁠11 ဖြင့် ပင်လယ်၊ တောင်တန်းတွေနဲ့ ကောင်းကင်ပြာကြီးတွေကို အေးအေးဆေးဆေးရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ အတိုင်းအဆမရှိတဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာအချိန်လေးတွေကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
Take you into the unknown. 64 MP periscope telephoto ကင်မရာ⁠12 ကဝေးနေတဲ့အရာတွေကိုအနီးကပ်ယူဆောင်လာပေးသလို HUAWEI XD Optics ကလည်းရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုများစွာတိုးတက်စေပါတယ်။ 200x Zoom8 အထိဆွဲယူနိုင်တာမို့ ကြည်လင်းပြတ်သားတည်ငြိမ်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းရနေမှာပါ။⁠
Near or far, no more blur. တည်ငြိမ်တဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုရရှိစေတဲ့ အဆင့်မြင့် AIS Pro နဲ့ OIS ကြောင့်ကားပြတင်းပေါက်မှမြင်ကွင်းသို့မဟုတ် ပွဲစဉ်တစ်ခုတွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအချိန်များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်စေပါတယ်။ လက်တုန်နေတာမို့ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုတွေပျက်စီးသွားတာမျိုးမဖြစ်တော့ပါ။
Capture it all in motion. အချိန်တိုင်းက ခဏပဲဖြစ်တယ်။ True-Focus Fast Capture feature ကလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုလွယ်ကူစွာဖမ်းယူနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
The key to being photogenic. အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောနောက်ဘက်ကင်မရာက ဘောင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အရောင်များကိုလှပစွာပြန်လည်ဖန်တီးပေးပြီး အသားရည်ရဲ့တောက်ပမှုကိုပြန်လည်ရရှိစေပါတယ်။
Details in, beauty stands out. 100° ultra-wide angle အရှေ့ကင်မရာ⁠13 နဲ့ selfies သို့မဟုတ် grouphies ဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါ မျက်နှာအသွင်အပြင်နဲ့မိတ်ကပ်များကို အသေးစိတ်တွေ့ရမှာပါ။ ၁၄ စင်တီမီတာအကွာတွင် အလိုအလျောက်အာရုံစိုက်ခြင်းက ထူးခြားစွာအနီးကပ်လုပ်ဆောင်စေပါတယ်။
Good frames completeagood story. All-range 4K ဗီဒီယိုစွမ်းရည်က ပုံရိပ်အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာဘဝ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဗီဒီယိုထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်စေပါတယ်။
Turn your idea intoagreat vlog. Auto-focus, AIS Anti-shake, ရှေ့နှင့်နောက် dual-view ဗီဒီယိုပါသော 100° Ultra-wide angle ရှေ့ကင်မရာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုများကို စိတ်ကြိုက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်။
Tips for AI tricks. AI Remove လုပ်ဆောင်ချက်က မြင်ကွင်းမှာပေါ်လာတဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အချိန်များကိုပိုမိုဖျော်ဖြေမှုဖြစ်စေဖို့ AI Cinemagraph ဖြင့်ရွေ့လျားနေတဲ့ အရာဝတ္ထုကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ။
* ဒီဓာတ်ပုံက HUAWEI P50 Pro နဲ့ရိုက်ထားတာမဟုတ်ပါ။ AI Remove effect သည်ပုံကို HUAWEI P50 Pro ဖြင့် ပြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သာဓကအနေနဲ့သာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်လက်တွေ့ကိုသာကိုးကားပါ။
3D Graphene Liquid Cooling System ကမြန်ဆန်ပြီး အပူလွန်ကျူးမှုကိုထိန်းချုပ်စဉ်မှာ5nm flagship chipset က‌ဒေတာအကူးအပြောင်း၊ အလုပ်မျိုးစုံရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတို့မှာ သာလွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေပါတယ်။
Dual စတီရီယိုစပီကာများမှ ထွက်လာတဲ့စွမ်းအားပြည့်တဲ့အသံတွေထဲမှာ စီးမျောလိုက်ပါ။ HUAWEI Histen ကမတူညီတဲ့အခြေအနေများအတွက်အသံတွေကိုဖန်တီးပေးတာမို့ ဂိမ်းကစားနေတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဗီဒီယိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်နေသကဲ့လို့ခံစားရပါတယ်။
ကြီးမားသော 4360 mAh ဘက်ထရီ⁠4 ကစိတ်ကြိုက်ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဂိမ်းတွေ၊ ဖုန်းအကြာကြီးပြောတာတွေပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။
66 W HUAWEI SuperCharge5 သည်သင်အနားယူနေစဉ်မှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းအားတစ်ခုကိုပေးပါတယ်။
50 W ကြိုးမဲ့ HUAWEI SuperCharge⁠6 ကအားသွင်းတဲ့အခက်အခဲကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းများကို အခြေခံကျတဲ့နည်းလမ်းသစ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ အကြိုက်ဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများကို Smart Folder တွင်ထည့်ပြီး အိုင်ကွန်ကိုတိုက်ရိုက်နှိပ်ခြင်းဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ရှာရလွယ်ကူပြီး ဖွင့်ရမြန်ဆန်ပါတယ်။
Control Panel အသစ်ကို swipe လုပ်၍ဖွင့်ပြီး အသံ၊ Wi-Fi ၊ Bluetooth ဆက်တင်များနှင့် HUAWEI ထုတ်ကုန်များ14 အကြားဆက်သွယ်မှုများကိုရယူပါ။⁠
Distributed File စနစ်အသစ်ဖြင့် ဖုန်းမှာရှိသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဓါတ်ပုံများအား လက်ပ်တော့မှနေ၍ လွယ်လင့်တကူ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ cable⁠15 တစ်ခုမှမလိုပဲဖွင့်လှစ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Learn more about HUAWEI MateBook >
ယခုအခါ MeeTime⁠16 ကိုအသုံးပြု၍ ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ စမတ်နာရီများနှင့် Visions များတွင် ချောမွေ့ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Web pages များနှင့် Application များကို Scroll လှိမ့်လိုက်ရုံဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ အချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုလျင်တောင်မှ အသုံးပြုရ အဆင်ပြေပြီး Application များဖွင့်ဖွင့်ချင်းတွင်လည်း နှေးကွေးမနေဘဲ လျင်မြန်ချောမွေ့စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သည်။
Application များအား လွယ်လွယ်ကူကူ ထိန်းချုပ်အသုံးပြုလိုက်ပါ။ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုထားတဲ့ Devices တွေအကြား တင်းကြပ်သော လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုထားရှိထားသည့်အတွက် Application များအသုံးပြုရာတွင် Security ပိုင်းကိုစိတ်ချနိုင်ပါတယ်။
ထောင့်စွန်းကွေး ဒီဇိုင်းရှိသော Display၏ ပြင်ပမျက်နှာပြင် ကန့်လန့်ဖြတ်အတိုင်းအတာသည် ထောင့်မှန်စတုဂံဆိုဒ် စံသတ်မှတ်ချက်များအရ တိုင်းတာသောအခါ 6.6 လက်မရှိပါသည်။ (အမှန်တကယ်မြင်ရသည့် ဧရိယာမှာ အနည်းငယ်ပိုသေးပါသည်။)
120 Hz screen refresh rate သည် သတ်မှတ်ထားသော အချို့ Apps များနှင့် သတ်မှတ်ထားသော အနေအထားများတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။
ဤထုတ်ကုန်ကို IEC standard 60529 အရ ရေဖြန်းခြင်း၊ ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအတွက် IP68 အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး ထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအောက်တွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ရေဖြန်းခြင်း၊ ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်အမြဲတမ်းအခြေအနေများမဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှခုခံမှုလျော့နည်းသွားနိုင်သည်။ ရေစိုနေတဲ့အချိန် သို့မဟုတ် စိုထိုင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖုန်းအားမသွင်းပါနှင့်။ သန့်ရှင်းရေးနှင့်‌လမ်းညွှန်ကို ကိုးကားပါ။ ရေထဲတွင်မြှုပ်ထားခြင်းနှင့်ရရှိလာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသည် အာမခံမရပါ။ IP68 rating ဆိုသည်မှာ အချို့သော စမ်းသပ်ချက်များအရ ထုတ်ကုန်အား ရေအောက် (1.5) မီတာအတွင်း မိနစ် (၃၀) အထိ ရေစိုခံနိုင်ပြီး လက်ရှိတွင် ရေနှင့်ထုတ်ကုန်အကြား အပူချိန်ကွာခြားချက်မှာ 5°C ထက်မပိုပါ။
ပုံမှန်အခြေအနေတွင် ဘက်ထရီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မှာ 4260 mAh ဖြစ်သည်။ HUAWEI Lab စမ်းသပ်မှုများမှရလဒ်များကိုအခြေခံသည်။ အမှန်တကယ်ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အမြင့်ဆုံး Charging ပါဝါမှာ 66 W ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော 66 W HUAWEI SuperCharge charger နှင့် Cable ကိုအသုံးပြုမှ ရရှိနိုင်မည်။
50 W သည်အများဆုံးကြိုးမဲ့အားသွင်းပါဝါဖြစ်ပြီး သီးခြားဝယ်ယူရသည့် HUAWEI SuperCharge Wireless Charger Stand (အများဆုံး 50 W) ကိုအသုံးပြုမှသာ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
True-Form Dual-Matrix Camera သည် True-Chroma ကင်မရာရဲ့ အဓိကကင်မရာ matrix ကို ရည်ညွှန်းပြီး SuperZoom matrix တွင် telephoto ကင်မရာနှင့် ultra wide angle ကင်မရာတို့ပါဝင်ပါသည်။
Zoom အကွာအဝေးသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်ချဲ့ခြင်းဖြင့်ခွဲခြားထားသောအမြင့်ဆုံး zoom အချိုးဖြစ်သည်။
300 Hz touch screen sampling rate သည် သတ်မှတ်ထားသော အချို့ Apps များနှင့် သတ်မှတ်ထားသော အနေအထားများတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။
1440 Hz high frequency PWM dimming သည် သတ်မှတ်ထားသော အချို့ Apps များနှင့် သတ်မှတ်ထားသော အနေအထားများတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။
120° သည် ကင်မရာ len ၏ သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအခြေအနေတွင်မြင်ကွင်းအကွာအဝေးသည်နိမ့်ကျနိုင်သည်။
64 MP ကတော့ ကင်မရာသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ pixels သည်ရိုက်ကူးမှုပုံစံပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
100° သည်ကင်မရာ len ၏သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအခြေအနေတွင်မြင်ကွင်းအကွာအဝေးသည်နိမ့်ကျနိုင်သည်။
ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့သောကိရိယာများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ Huawei customer serviceနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အချို့သော Huawei မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်အချို့သော HUAWEI MateBook များ (Computer Manager 11.1 နှင့်အထက်)နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းကိရိယာသည် Huawei အကောင့်တစ်ခုတည်းသို့ log in လုပ်ရန်၊ Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုတည်းတွင်ရှိရန်၊ Bluetooth ကိုဖွင့်ရန်နှင့် " Multi-device file browsing" switch ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမော်ဒယ်များနှင့်ဆော့ဝဲဗားရှင်းသည်အင်္ဂါရပ်ကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Huawei customer service သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအရည်အ‌သွေးသည် network အခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မည်သည့်စျေးကွက်တွင်နှင့်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမော်ဒယ်များသည် MeeTime ကိုထောက်ပံ့သည်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Huawei customer service သို့ဆက်သွယ်ပါ။